DAAWO: Donald Trump oo hay’ad ka tirsan DF ku KHASBAY inay shacabka BEEN u sheegto (Sababta ayaa kasii daran) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Donald Trump oo hay’ad ka tirsan DF ku KHASBAY inay shacabka...
DAAWO: Donald Trump oo hay’ad ka tirsan DF ku KHASBAY inay shacabka BEEN u sheegto (Sababta ayaa kasii daran)
(Washington, DC) 13 Sebt 2019 – Madaxwaynaha Maraykanka ee Donald Trump, ayaa beri dhowayd markii dadka looga digayay Duufaanta Dorian oo sida ay sheegtay hay’adda saadaasha hawada NOAA ku wajahnayd gobolka Florida, wuxuu iskii Twitter ugu sheegay inay sidoo kalena maran doonto gobolka deriska la ah ee Alabama.
Fiiri koobaabinta madoow ee ka jiidan maabka Florida.
Arrintaas ayaa khasab kaga dhigtay hay’adda NOAA inay beeniso warka Madaxwaynaha, taasoo noqotay arrin ku cusub saaxada Maraykanka, in Madaxwaynihii dalku wuxuu doono iska sheegayo kaddibna ay hay’aadkii dowladdu xaaqin ka daba qaataan sida aan shacabku u jahawareerin.
Yeelkeede, halkaa kuma harin ee Mick Mulvaney, Agaasimaha Aqalka Cad ayaa Wilbur Ross, Wasiirka Ganacsiga u sheegay in hay’adda NOAA ay shaaciso in ay duufaantu mari doonto Alabama taasoo ay diiddey hay’addu.
Saraakiil sare oo aan magacooda la shaacin ayaa New York Times u sheegay in uu Trump oo sawirka uu adeegsaday qalin ku sawiray koobaabin muujinaysa Alabama, uu dadka la shaqeeya ka codsaday in NOAA ay ”sharraxdo” mowqifkeeda khilaafsan kiisa.
NOAA, oo wasaarad ahaan hoos tagta Wasaaradda Ganacsiga, ayaa deeto soo saartay warqad aan saxiixnayn oo ay ku sheegayso in xafiiska ay ku leeyihiin Birmingham, Alabama, ee Saadaasha Hawada Qaranku uu ku khaldanaa inuu beeniyo warka Madaxwaynaha qayb ahaan.
Yeelkeede, arrintan ayaa dood ka kicisay Maraykanka iyadoo Trump lagu eedeeyay inuu siyaasadeeynayo saadaasha hawada oo ah arrin muhim u ah shacabka, gaar ahaan gobollada ay kusoo noqnoqoto ee dhexe iyo kuwa koonfur bari.
Dembi Baaraha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga ayaa iminka baaris bilaabay, halka Guddi Hoosaadka Sayniska ee Aqalka Wakiillada ee ay Dimoqraadigu aqlabiyadda ku leeyihiin uu isna bilaabay baaris u gaar ah.
Trump oo la sheegay inuu Ross ugu hanjabey inuu cayrin doono ayay dadku la yaabban yihiin inuu been cad u sheegay shacabkii Maraykanka, balse aanu intaa ku ekaane uu hay’aadkii dowladda ku cadaadinayo inay beentiisa ansixiyaan.
Previous articleDEG DEG: Siyaasi caan ah oo si xun loogu dhaawacay Kismaayo
Next articleMaxay nolosha magaalowdey ka bedeshey DULMI & LIIDMO haweenka lagu hayn jirey?!